निर्मला हत्या काण्ड : अब त अत्ति भो भन्दैं आफैं अनुसन्धानमा खटिए आइजिपी खनाल !
काठमाडौं । निर्मला हत्याको चार महिना भन्दा धेरैं समय वितिसक्दासम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदैं आएको छ । निर्मला प्रकरणले प्रहरी नेतृत्वमाथि कति धेरै दबाब बढाएको छ भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफैंले सोधपुछमा खटिएका छन् ।
काठमाडौंमा पक्राउ परेका युवकमाथि सोधपुछ गर्न महानिरीक्षक खनाल आफैं सिआईबीमा पुगेको स्रोत बताउँछ । घटनाको उनको प्रबल सम्भावना रहेको ब्रिफिङका आधारमा उनी आफैं सोधपुछका खटिएका हुन् । विगतमा सिआईबीबाट भएको अनुसन्धान विवादमा परेकाले पनि आइजिपी आफैं खटिएका हुन् । सोधपुछका क्रममा उनको संलग्नताको धेरै क्लुहरू मिलेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
बालिका निर्मला पन्तको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्छ, नयाँ पत्रिकाको अनुसार प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानले यस्तै संकेत गरेको छ । यही आशंकामा चारजना पक्राउ परेका छन्, एक काठमाडौँमा र तीन महेन्द्रनगरमा । सामूहिक बलात्कार गरेको आशंकामा छिमेकी प्रदीप रावल काठमाडौँ आएपछि पक्राउ परेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
बूढानीलकण्ठका मेयर भन्छन् : म आफैं खुसी छैन
वर्षा रोकिएसँगै पाख्रीबास हिले सडकखण्ड पुन: सुरु
धोवी खोला किनारमा भेटियो युवकको शव
भारत तपाईँहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
भारतमा बन्धक बनाइएका तीन महिलाको उद्दार
अब मुक्तिनाथ दर्शन गर्न १०० रुपैयाँ !
समुदायबाटै बजार अनुगमन
कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको अवस्था गम्भीर
निर्मलालाई न्याय माग्दा चलेको गोलीले इन्जिनियरिङ तयारीमा रहेका युवाको खुट्टा गुम्यो : अवस्था अर्धचेत